Amadini eBhayibhileni nanamhla - Christian Literature Fund
By CLF	All, Pamphlets, Pamphlets for Congregations XHO181
EBhayibhileni sifunda ngamadini anyuswayo ukusukela kwelokuqala iphepha de uye kutsho kwelokugqibela. Kula madini abantu basebenzisa izilwanyana nezinye iintlobo zokutya abanika ngazo imbeko kuThixo okanye xa befuna ukufumana nto kuye.
AkumaSirayeli kuphela awayesenza la madini, njengohlanga olukhethekileyo lukaThixo ngokwaseBhayibhieni, nezinye izizwe ezazinqula izithixo zaziwenza nawo amadini. Nanamhla oku abantu bayawanyusa amadini. Izilwanyana abathi abantu bazixhele xa besenzela izinyanya amasiko, okanye izithixo okanye abantu abafuna uncedo kubo. Zingathatyathwa njengamadini.
Ingaba thina maKrestu siyibona njani le nto yala madini? Ingaba kusafuneka siwenze la madini esifunda ngawo kwiTestamente eNdala? Simele okanye sisafanele kukuqhubeka namasiko emveli sixhele izilwanyana na?
Ukuze siwuqonde kakuhle umcimbi wamadini nokuze sazi ukuba sifanele ukuba senze kanjani na, kungakuhle xa sinokuthi siwazisise ngokwahlukana kwawo ngokwaseBhayibhileni, nangokwale mihla esiphila kuyo.
Kumaxesha asendulo eBhayibhile, amadini ayesenziwa kwiindawo ezahlukeneyo, umzuzu nomzuzu xa umntu efuna ukunika uThixo imbeko okanye efuna ukumbulela(iGenesis 4:3-4). Ngelo lixa nawuphi na umntu wayekhululekile ukuba alenze idini, kodwa kwakuvamise ukuba ibe yintloko yekhaya ethabatha le nxaxheba (1 kaSamweli 1:3). Amadini ayesenziwa esibingelelweni esasiyingqumba yamatye apho umlilo wawubaswa khona ukutshisa idini.
Ngexesha uSirayeli esiba sisizwe, waza Yena uThixo wamnika imithetho yakhe, wabayalela okokuba benze amadini kwindawo abanqulela kuyo (njengendlu yecawe kuthi kwezi mini). Ekuqaleni kwakusetyenziswa intente yokunqulela (ithabenekile), ekwathi kamva xa sele besisizwe eKanana basebenzisa itempile. Isibingelelo sasisetyenziswa nalapho etempileni.
Ukusukela ngoko ke abantu abakhethekileyo, ababingeleli, banyulwa nguThixo. Yaba ngumsebenzi wabo ke lo wokunyusa amadini, bewenza egameni labantu.
Kwa uyise kaYohane uMbhaptizi wayengumbingeleli owaye kwanjalo naye (uLuka 1:8-10). Kwincwadi yoNqulo (iLevitikus) sifunda ngemisebenzi eyodwa yababingeleli. Kwakufuneka ibe ngabantu abangcwele, banyuse amadini kanye kanye ngohlobo uThixo awayebayalele ngalo. Kwale ncwadi inye iLevitikus kwisahluko se-16 isixelela ngedini elilodwa elalisenziwa kanye ngonyaka, ngoSuku oluKhulu lweNtlawulelo. Ngalo mhla uMbingeleli oMkhulu wayeye athabathe igazi ebekwenziwe ngalo idini alise entendelezweni yesibingelelo ngenjongo yokungxengxeza kuThixo ngako konke ukona kwabantu. Eli gazi lalimela onke amadini athi enziwa kuloo nyaka wonke.
Kwabakho inguqu enkulu kwiTestamente eNtsha. Ukube-thelelwa nokufa kukaYesu emnqamlezweni, kumaxa amaninzi, kuthiwa lidini (Kwabase-Efese 5:2; KumaHebhere 7:27; 9:26; 10:5-10). IBhayibhile iwachaza la madini akwiTestamente eNdala “njengezithunzi” zamadini anga-wona-wona kaYesu Krestu (KwabaseKolose 2:16-17; KumaHebhere 9:23; 10:1-4). La madini ayesisalathiso selona dini lokwenyani elaliza kuza.
Kwingcaciso yamadini eTestamente eNdala achazwa apha ngezantsi, siza kubona indlela alatha ngayo kwelona dini lililo elinguYesu. Kodwa la madini ale Testamente iNdala akwasinceda ekubeni sifumane intsingiselo enzulu ngesakwenzelwa nguYesu ngokufa kwakhe emnqamlezweni.
Iindidi ezahlukeneyo zamadini
Funda kwincwadi yoNqulo iLevitikus 7:37-38. Kule ncwadi sifunda lukhulu ngamadini. Kukwakule ncwadi, izahluko 1 ukuya ku-7, apho sifunda khona okokuba la madini achazwa apha ayesenzeka kanjani. Ngokommo zazimbini iintlobo zala madini ezizezi:
Amadini okubulela uThixo nokumnika imbeko
Isahluko sokuqala seLevitikus sichaza ngamadini ezilwa-nyana. Esesibini isahluko simalunga nalawo okutya okunje ngengqolowa. La madini ayetshiswa ngokupheleleyo.Yinto ke le eyayingumqondiso wokuba bonke abantu, nazo zonke izinto abanazo zezikaThixo ngokupheleleyo. Yayizintlobo zamadini ezinje ngalawo anikelwa nguKayen noAbheli (iGenesis 4), kunye noNowa noAbram nabanye ke abaninzi. Le madini ayesenziwa mihla le, ingakumbi ngemini yeSabatha, nangemini yemibhiyozo emikhulu (iNumeri 28-29).
Amadini okucela uxolelo lwezono kuThixo
Incwadi yeLevitikus izahluko 3 ukuya ku-5 ichaza amadini ahlukeneyo esono awayesenziwa kwiimeko ezahlukileyo, nangokokwahluka kwezono ezo. Umzekelo, kwakubakho amadini ahlukileyo awayesenzelwa ababingeleli, kubekho enzelwa iinkokheli, nawenzelwa abantu bebonke, ukanti ke nabantu nje abakholwayo. Athile amadini ayesenziwa unyaka nonyaka ngeMini eNkulu yeNtlawulelo, onke yayingamadini okuhlambulula isono (iLevitikus 16). Into ebalaseleyo ngale micimbi yeyokuba ngolu suku kwakuxhelwa ibhokhwe enye, ize enye ileqwe iyokungeniswa entlango apho iya kufela khona (iLevitikus 16: 20-22). Eli gama lithi “intlawulelo” lithetha ukuhlawulela ityala ukuze kubuyiselwe ubudlelwane phakathi koThixo nathi bantu, budlelwane obo baqhawulwa sisono.
2.1 Awona madini anxulumene nezono
Funda eyoNqulo 3:1-5. Imicimbi yonqulo kunye namadini kwakufuneka yenziwe ngendlela eyiyo (iNumeri 16). Into nganye eyayisenziwa xa kunyuswa amadini kwiTestamente eNdala yayisenzelwa okokuba masiqonde ngcono ngokufa kukaYesu. KumaHebhere 8:5 kubhaliwe kwathiwa, “Phofu bona into abayenzayo ingumfuziselo nesithunzi nje sento yokwenene esezulwini” koko kwenziwa nguYesu. Amadini anxulumene nezono kwakufuneka enzelwe kumnquba, ze kamva enzelwe etempileni (Levitikus 17:1-4). Yinto ke leyo eyayibonakalisa ukuba iJerusalem yayikukuphela kwendawo kaYesu anokuthi afele izono zethu kuyo. Akukho ndlela okanye ndawo yimbi ngaphandle koYesu apho sinokufumana khona uxolelo lwezono.
Onke la madini ayenyuswa ngababingeleli. Kodwa uMbingeleli oMkhulu wayesenza umnikelo owodwa, minyaka yonke ngoSuku oluKhulu lweNtlawulelo. Kwincwadi yamaHebhere uYesu ubizwa ngokuba unguMbingeleli oMkhulu njengoMeltshizedek, owayemkhulu nangaphezulu kwabanye ababingeleli abakhulu. Okwenziwa nguYesu xa wayenikela ngesiqu sakhe, wakwenza oku enguMbingeleli oMkhulu okhethekileyo (KumaHebhere 7:26-8:4). Wayengafani nababingeleli abakhulu bona babesenza amadini ngokuzingca ngokweziqu zabo, koko uYesu yena wayengenasono. Wazenza idini Yena ngenxa yethu.
Zonke izilwanyana ekwakunikelwa ngazo kwakufuneka zingabi nasiphako (iLevitikus 3:1). Ukuze uYesu abe nako ukuhlawulela isono sethu waba kwisimo sokuba ngumntu nesokuba nguThixo, ngaxesha nye. Njengonyana ongenasono kaThixo waba lidini elingenasiphako (1 KwabaseKorinte 5:21; KumaHebhere 9:14). Umntu lowo ozise isilwanyana wayebeka isandla sakhe entlokweni yesilwanyana eso. Lo yayingumqondiso wokuba isono netyala uzibeka kweso silwanyana (iLevitikus 16:21). Izono zethu kungoku nje zibekwe emagxeni kaYesu yaye wafela izono zethu (uIsaya 53:5-6; KwabaseRoma 4:23-25).
Inkunzi yenkomo okanye igusha okanye ibhokwe kwakufuneka ibulewe njengedini. Umvuzo wesono kukufa (KwabaseRoma 6:23). Thina bantu asinako ukuhlawulela ezethu izono ngokufa. UThixo wacwangcisa ukuba makufe isilwanyana endaweni yomoni. Ezi zilwanyana zalatha kuYesu owasifelayo (KwabaseGalati 3:13).
NgoSuku oluKhulu lweNtlawulelo kwakubulawa ibhokhwe enye, ze enye ileqwe ukuze iyokufa ngaphandle entlango. Le nto isikhumbuza uYesu owathi naye wafela ngaphandle kwamasango edolophu, kwintatyana eyayiyodwa yokufa (uMatewu 27:32-33; KumaHebhere 13:10-12).
Igazi lomnikelo lalibekwa esibingelelweni. NgoSuku oluKhulu lweNtlawulelo, igazi lalifefwa esicikweni seBhokisi yoMnqophiso (iLevitikus 16:14). Igazi ngumfuziselo wobomi besilwanyana esabulawayo: igazi lithwele ubomi (iGenesis 9:4). Xa sisithi “Igazi likaYesu liyasihlambulula kuso nasiphi na isono” kuthethwa ukuba uYesu wahlawulela izono zethu ngobomi bakhe (1kaYohane 1:1-2:2; Kwabase-Efese 1:17;KumaHebhere 9:12-15,22).
Ezona nyama zesilwanyana zinesongo nezithambileyo zazitshiswa ukuvuyisa uThixo. Elona dini limvuyisa ngokwenene uThixo lelo linguYesu Krestu kuphela (KumaHebhere 10:5-10).
Amadini esono ayephindwa-phindwa xa umntu ethe wona, kananjalo kanye ngonyaka ngoSuku oluKhulu lweNtlawulelo. UYesu wafela izono zethu kanye qwaba. Idini awazenza lona akukho mfuneko yakuliphinda-phinda (KumaHebhere 10:11-18). Emasikwenze thina kukuzivuma izono zethu, sicele uxolelo xa sithe saziqonda ukuba sonile ehlabathi (uMatewu 6:12; 1kaYohane 1:8-2:1).
Lilonke, amadini awayesenziwa ngexesha leTestamente eNdala masingawagcini. Azizithunzi nje ezathi zadlula kwakufika uYesu (KumaHebhere 9:3-14). Akusekho mfuneko yadini ngoku (KumaHebhere 9:25-26). “UYesu yena wazinikela kwaba kanye qwaba, idini loqobo elakuhlala lihleli…Kaloku yena ubenze bahlala besulungekile ngomnikelo omnye qha abo bangcwaliswayo. Apho uxolelo lwezono lukhona, akusafuneki mnikelo ngenxa yazo” (KumaHebhere 10:12, 14, 18).
2.2 Amadini ombulelo
Funda uJeremiya 33:11. Amadini okubulela uThixo nokumzukisa ngenxa yenkathalo neentsikelelo zakhe, ayesenziwa nguloo mntu ngokwentando yakhe xa ebulela izibele zikaThixo (iGenesis 8:20). Ukanti ke umkhosi wonke kaThixo xa uhlanganisene kwimibhiyozo, unyaka nonyaka, wawusiza uphethe amadini. Ngale ndlela abantu babebonakalisa ukumthanda kwabo uThixo nokuzinikela kuye (iNdumiso 116:17). La madini ayekhatshwa ziingoma nemithandazo yokudumisa (iNdumiso 141:2).
Sisoloko sifunda into yokokuba la madini ayengamkelwa nguThixo (uAmosi 4:4; 5:22). Xa ubani ebulela ezukisa uThixo kanti uyahanahanisa, okanye uqhubeka esenza izinto ezingatshongo khona njengoAbheli, elo dini alinantsingiselo. UThixo uthi oko uyakucaphukela. Kungoko ke Yena esithi ukhetha intliziyo enyulu nomoya onyanisekileyo kunedini ubani anokuthi alizise (iNdumiso 40:6-8;51:16-17; iZafobe 21:3; uHosiya 6:6).
UPawulos uthi okona kunqula kukuko, “kukuba nizinikele nina iziqu nibe lidini eliphilayo, elingcwele, elikholekileyo kuThixo” (KwabaseRoma 12:1). Incwadi yamaHebhere 13:15-16 ithi, “Ngawo onke amaxesha masenze umbongo kuThixo, ube lidini esilinikela kuye ngoYesu, silivuma ngomlomo wethu igama lakhe. Masingaze siyeke ukwenzelana ububele, kuba leyo yeyona minikelo imkholisayo uThixo” ( utsho noMika6:6-8; nekaYakobi 1:27).
Kwanemali esiyikhuphayo ekwenzeni umsebenzi kaThixo nokunceda abantu abahlelelekileyo kuthiwa lidini (KwabaseFilipi 4:18). UPawulos uyayicacisa kule ncwadi, 2 KwabaseKorinte 8:1-15, indlela emasinikele ngayo.
2.3 Amadini ngezilwanyana kule mihla
Funda 1 yooKumkani 18:20-39. Ngamaxesha eTestamente eNdala neNtsha izizwe ezininzi zazisenza amadini. Zaziwenzela izithixo ngenjongo zokuba zibenzele izinto ezimangalisayo. Mhla uSirayeli waya eKanana ukuba ayokuba yinxenye yazo zonke ezo zizwe, uThixo wamyalela ukuba bawadilize bawachithe amaqonga ezibingelelo apho amadini abubuxoki ayenyuswa khona (IDuteronomi 7: 1-6). Imithetho yokuqala nowesibini, ngokulandelelana kwayo kwiMithetho eliShumi, ithi mnye qha uThixo onguThixo. Yaye akanakukhonzwa njengezithixo. Kwakhona, asinakukhonza yaye sinyuse nedini malunga nezithixo siphinde sithi siyamkhonza.
Enye yezinto iintlanga ezaziyixelelwe, ezo zithe zaguquka zangamaKrestu emva kwePentekoste yeyokuba, “ mazingatyi naluphi na uhlobo lokutya okungahlambulukanga ngenxa yokubingelelwa kwizithixo (iZenzo 15:20). EKorinte, njengaseRoma eyayimelene nayo, amadini ayenikelwa kwizithixo ezininzi (iZenzo 17: 16,23). UPawulos wawayala la maKrestu asematsha ukuba angazibandakanyi nala madini. Xa ubani enyusa la madini, uzibophelela kwezi zithixo, nto leyo ngathi ukhonza uSathana (1 KwabaseKorinte 10:14-22).
EKorinte kwakukho amakholwa awathi wona ahlukana nokukhonza izithixo. Kwabakho mpikiswano ithile eyawenza wona athi akhululekile ukuba angayidla inyama ebiza kunikwa ezi zithixo. UPawulos wavumelana nawo koku, kodwa wawalumkisa ngelithi ukuba ayaqhubeka esenza ngolu hlobo, aza kutyhafisa amaKrestu asebuthakathaka, wona asenendawo yokukholelwa kwezi zithixo kuba ukholo lwabo luselutsha, basenokuphindela kundalashe (1 KwabaseKorinte 10:23-33). Isahluko sesibhozo kuyo yona le ncwadi kaPawulos sithetha kwangale ngxaki inye, atsho esithi, “Lumkani, hleze ilungelo lenu lokutya nayiphi na inyama libe sisikhubekiso kwabo bangekakhululeki ezithetheni. Ngenxa yale nto ke ndithi: ukuba ukutya kuyamkhubekisa umwethu, andisayi kutya nyama naphakade” (1 KwabaseKorinte 8:9,13).
Kwiinkcubeko ezininzi zethu apha eAfrika izilwanyana ziyabulawa ukwenza amasiko ahlukeneyo kunye nemicimbi yekhaya. Umahluko phakathi kokuxhelelwa kwamasiko nokuxhela nje inyama ngowokuba apha emasikweni kuye kubizwe amagama ezinyanya zekhaya xa kuxhelwa inkomo okanye ibhokhwe. Isilwanyana esi siye sixhelelwe ukwazisa izinyanya loo nto ithile, okanye ukufuna ingcaciso ngento ethile. Amanye ke amaKrestu awakhula nala masiko asakholelwa ukuba asenokukwenza oku ngoku sele eguqukile: njengenxenye yenkcubeko yabo. Abanye bathi le nkqubo inxamnye nenkolo yobuKrestu.
Abantu bathi izinyanya zabo ayizizo izithixo, yaye ngokwenene zingezizo needimoni (1KwabaseKorinte 10:21). Kunjalo. IBhayibhile ayithethi ngqo ngezinyanya nangamasiko ethu. Kodwa ke kutheni le nto abantu baxhelayo kula masiko? Kukho lutho abalulindele kwezi zinyanya. Banoloyiko lokuba okubi kuya kubehlela xa bengawenzi la madini. Itsho ke le nto isibonise mhlophe okokuba bayakholelwa kwizinyanya zabo, yaye bathembele kuzo.
UMthetho wokuQala uthi masingabi nathixo bambi ngaphandle koThixo; asinako ukubeka ithemba lethu kwenye into ngaphandle kukaThixo. Owesibini uMthetho uthi masingenzi nto ebonisa ukholo lwethu kwezinye izinto. Kona kona izinyanya azizizo izithixo, zingezizo nazithixo zabuxoki. Kodwa ke thina bantu, ezi zinyanya siyazenza izithixo xa sisenza izinto ezibonakalisa ukuba sithembele kuzo.
Bambi abantu bathi bakhonza uThixo kuba amadini abawenzayo bawenzela yena. Bathi ke izinyanya zisondele kuThixo kunabo, ngoko ke zinako ukubathethelela kuThixo. Abukho ubunyani kule ntetho. UYesu nguye kuphela osithethelelayo, kuphela koMxolelanisi esinaye (1 KuTimoti 2:5).
Kukho iimvaba ezixhela iibhokhwe neenkukhu njengenxenye yeenkonzo zazo (nto ke leyo ekuthiwa sisihlabelelo esiXhoseni). Kunzima kakhulu ukugqiba okokuba kukuko oku okanye ayisikuko. Ixhomekeka le nto kwimfundiso yemvaba leyo malunga nalo mbandela, nakwinkolo yekholwa ngalinye. Komnye umntu ingangumqondiso ongenantsingiselo. Ukanti komnye ingayindlela ekuthiwa yeyobuKrestu nje yokunqula izinyanya. Ukuxhela ecaweni singakufanisa nokucangcatha kumhlaba onobungozi kakhulu. Inganika ingqondo ethi abantu bakhonza uThixo ophilayo. Kanti ke ingayenza nento yokubuyisela umva abantu kwiinkolo zabo ezindala. IBhayibhile iyibeka icace gca into yokuba akukho mfuneko yamadini ngezilwanya nakuphalala kwagazi. UKrestu nguye kuphela qha olidini, akukho limbi ngaphaya kwakhe (KumaHebhere 10: 14,18).
UGqirha Danie van Zyl
We inhabit the earth
The earth is our home. We not so much live on the earth; we live in the world; we... read more
Ukubaluleka kwePasika Kwiinkonzo ezininzi zama-Afrika apha eMzantsi Afrika iPasika lelona xesha libalulekileyo lonyaka. AmaKrestu enkonzo ezithile athabatha iihambo ezinde ukuze... read more